La casita del reloj - I-Airbnb
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguAlfonso
Ifakwe kweyona Plaza idumileyo kwiziko lembali lase-Estepona. Indawo yokuhlala ijikelezwe zezona ndawo zokutyela zibalaseleyo, imivalo kunye neevenkile e-Estepona. Akukho mfuneko yemoto njengoko yonke into ihamba imizuzu embalwa ukusuka kumnyango wakho wangaphambili. Ulwandle lumalunga nemizuzu emi-3 ukuhamba. Indawo yokupaka kwi-150m nge-euro eyi-1 ngosuku.
Isantya seFayibha 600 MB.(ibhedi eyongezelelweyo 1pers 80x200 ekhululekile kakhulu) Umntwana/uMhlobo
Isitudiyo sinophahla oluphezulu kunye nefestile enkulu ejonge iPlaza.
Kukho ikhitshi elincinci elinefriji, isinki, imicrowave kunye nesitovu sombane.
Igumbi lokuhlambela elinendlu yangasese, isitya kunye neshawari. (ishampoo, isepha, iitawuli, isomisi enwele, njalo njalo)
Ibhedi ephindwe kabini iphakanyiswe eqongeni ukuze kusetyenziswe kakhulu indawo. Nangona kunjalo, kuba ngubani ofuna ukulala kumgangatho osezantsi, isitulo esi-1 se-armchair siya kuba mnandi kakhulu. Ukukwazi ukuhlalisa umntu wesithathu / umntu / umntwana okanye nje abahlobo aba-2 abafuni ukwabelana ngebhedi enye. Ayibafanelanga abantu abaneengxaki zokuhamba. (12 sq yeemitha)
4.84 · Izimvo eziyi-109
ICasita imi kwindawo yabahambi ngeenyawo kwidolophu yakudala yase-Estepona.
Izitshixo ziyafumaneka kwalapha kule adress ndihlala ngase Casita. Undithumelele umyalezo xa linini ixesha lokufika kwakho ngaphambili ukuze ndikunikeze izitshixo kwaye wenze ukukhangela. Ndicela undazise xa ulibaziseka nangasiphi na isizathu.
Izitshixo ziyafumaneka kwalapha kule adress ndihlala ngase Casita. Undithumelele umyalezo xa linini ixesha lokufika kwakho ngaphambili ukuze ndikunikeze izitshixo kwaye wenze ukukh…
Inombolo yomthetho: VFT/ma/14329